Yaa Dayacay Sool iyo Sanaag?! Dowladda Soomaaliya Oo Ka Jawaabtay! – Goobjoog News
Yaa Dayacay Sool iyo Sanaag?! Dowladda Soomaaliya Oo Ka Jawaabtay!
Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay sheegtay in ay dayacday gobollada Sool iyo Sanaag, arrintan ayaa timid kadib markii Goobjoog News ay xiriir la sameysay madaxweynaha Khaatumo Cali Khaliif Galeyr, Xukuumadda federaalka ah, Xildhibaannada federaalka ah iyo dadka deggan Sool iyo Sanaag si looga jawaabo “ Yaa Dayacay Sool iyo Sanaag”?!!
Madaxweynaha maamulka Khaatumo Cali Khalif Galeyr oo wareysi gaar ah siiyay Goobjoog News ayaa sheegay in dowladda federaalka ay dayacday dadka ku dhaqan gobollada Sool iyo Sanaag ama Khaatumo.
Dhinaca kale, Goobjoog News ayaa la xiriirtay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka oo ah midda mas’uul ka ah File-ka federalism-ka dalka si ay uja jawaabaan cabashada Cali Khalif Galeyr, wasaaradda waxaa ay qirtay in uu jiro dayacaad lagu hayo dadka ku nool Sool iyo Sanaag, laakin waxaa ay sheegtay in ay diyaarisay barnaamij hor-umarineed oo dhawaan la bilaabi doono gobollada Sool iyo Sanaag.
Saraakiisha wasaaradda ee la hadlay Goobjoog News waxaa sheegayaan in Khaatumo aaney waafaqsaneen hannaanka federaalka ah ee ka jira, taas waxaa ku tusinaya labo arrin: Khaatumo kama tirsana madasha hoggaanka qaran iyo arrinta 2aad oo ah kuma jirto New Deal-ka taasi oo aad ogtahay in lagu helo kaalmada iyo deeqaha caalamka”.
Wasaaradda arrimaha gudaha waxaa ay qirtay in la dayacay Khaatumo iyo guud ahaan gobollada Sool iyo Sanaag, Laakin wixii bishii February ee sanadkan ka dambeeyay dowladda waxaa ay bilowday ka fakirista sidii gobollada Sool iyo Sanaag si gaar ah wax loogu qaban-lahaa, qorshahaas oo dhawaan bilaaban doona….sidaa waxaa Goobjoog u xaqiijiyay mas’uul u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha.
Goobjoog News ayaa dhinaca kale la hadashay dadka ku dhaqan deegaanka kuwaas oo ku dheeraaday waxyaabaha ay ka tabanayaan dowladda dhexe ee Soomaaliya, qaarkood waxaa ay sheegeen in dowladda ay hal mar uun ka heleen daawo iyo Filinbooyin uu keenay Cali Khalif, wax kale oo dhanka dowladda uga tagay nooma sheegin.
W/Q: Abdi Aziz Gurbiye, Goobjoog News
Wafdi ka socda QM oo maanta gaaray Jowhar
Dhageyso: Wararkii ugu dambeeyay shirka maamulka Koonfur Galbeed ee ka socda Baydhaba
Hbcuxd zbfery 10mg cialis cialis india
Dfyope sbcyxq cialis coupon where to buy cialis online
Obujtc wupedf Viagra order cialis coupon walmart
Blydil heuslb canada pharmacy online canadian pharmacy
Jubbaland oo Warsaxaafadeed Kasoo Saartay Arrimaha Doorashooyinka Federaalka
write essay service - assignment writing services my best fr...
eassy help - http://payxessays.com/ how to write my thesis...
essay buy online - website to write essays pay for essay...
mba essay service - http://payxessays.com/ academic writing...
pre written essays for sale - term papers writing service pa...